Waa maxay AVCHD File?
AVCHD u taagan tahay Advanced Video sireed High Qeexid. Waa qaab diiwaangelin, digital oo loo maqli karo ee Video Qeexid Sare. Waa Qori calaamadaha 1080i iyo 720p gal warbaahinta qaarkood iyadoo la isticmaalayo tignoolajiyada codec aad u waxtar fiican. Waxaa si wadajir ah ee ay soo Panasonic iyo Sony. Sannadkii 2006 shirkadaha, horumariyo AVCHD loogu isticmaalo kaamirada macaamiisha qeexitaanka sare. Sanadkii 2007, labada Panasonic iyo Sony sii daayay kaamirada AVCHD macaamiisha hore. Sanadkii 2011, faahfaahinta AVCHD la beddelay oo ay ku jiraan laba qaabab cusub - 1080-line 50-loox / s iyo 60-loox / s. The hababka cusub ee lagu dhawaaqay waxay u baahan yihiin heerka double xogta ka badan hababka hore.
By isticmaalaya qaab AVCHD, waxaad gubi karaa qeexidda video sare si ay u DVD disc caadiga ah. Later waxaad ka ciyaari kartaa DVD disc in ciyaaryahan disc Blu-ray. Saasaana aha in aad leedahay a gubi disc Blu-ray inay ku raaxaystaan ​​qeexidda video sare ciyaaryahanka disc Blu-ray. AVCHD video sidoo kale la outputted karaa in TV via cable ama qaybaha wax soo saar HDMI ah. Waxaa sidoo kale loo gudbin karaa oo u arkaan in computer.
Qaybta 1aad: Maxaa ku jira faylka AVCHD ah?
Qeybta 2: Available codec u AVCHD
Qeybta 3: Sida loo Radidiyaha file AVCHD?
Qeybta 4: Sida loo rogo ama file AVCHD la Wondershare Video Converter Ultimate
AVCHD isticmaalaa MPEG - 4 AVC / H.264 caadiga ah ee video riixo oo taageera noocyo kala duwan oo caadiga ah, qeexitaanka sare, iyo stereoscopic video xal. Waxa ay taageertaa Dolby AC-3 iyo uncompressed toosan PCM labadaba riixo audio.
File AVCHD ka kooban tahay duubayaa iyo video la subtitles iyo durdurrada kale amarro. Kuwan waxaa multiplexed socodka ah gaadiidka MPEG oo ku kaydsan sida faylasha binary warbaahinta. Wixii nidaamka file, kaararka xusuusta iyo HDDs isticmaasho baruurta iyo cajalladaha indhaha u isticmaali UDF ama ISO9660.
Marka laga reebo qaar ka mid ah kala duwan, hab-file ah AVCHD waxaa ka soo jeeda faahfaahinta Blu-ray disc ah. Tusaale ahaan waxay isticmaalaan tagay Habka magacyada 8.3 file halka disc Blu-ray isticmaalaa filenames dheer.
AVCHD taageertaa noocyo kala duwan oo xal iyo iskaanka hababka video laakiin inta badan kaamirada ay taageeraan hadana in yar oo ah qaabab video iyo maqal ah ee loo ogol yahay in heerka AVCHD ah.
Video isdhaafsan: AVCHD taageertaa labada AVCHD-SD ama Qeexid iyo AVCHD Standard 1080i ama High Qeexid video oo isdhaafsan halka 1080i AVCHD waa la heli karaa iyadoo kaamirada AVCHD ugu.
Progressive-scan video : AVCHD taageertaa 720-line hab duubo horumar heerar jir ah 24 iyo 60 looxyada / s 60 daydo Hz iyo 50 looxyada / s 50 Hz lagu daydo.
Inta badan kaamirada AVCHD isticmaali Dolby Digital (AC-3) nidaamka riixo iyo rikoodh iyo multichannel labada audio waxaa lagu taageeray. Isbedelada heerka xogta Audio ka 64Kbit / s inay 640Kbit / s laakiin ficil ahaan 256 Kbit / s iyo 384 Kbit / s inta badan waxaa loo isticmaalaa.
AVCHD Guudmarka Qaabka:
Waxaa ka mid ah decoder AVCHD ah in ay maktabadda libavcodec in loo isticmaalo by ffdshow, xor ah oo furan il ururinta codecs for Windows.
Waxaa dhab ahaantii waa decoder H.264 ah, laakiin sidoo kale aqrisan kara AVCHD iyo sidoo kale qaar ka mid ah qaabab kale H.264.
Waxa uu isticmaalaa libavcodec in uu kelmadaha AVCHD on Linux, BSD, OS X, Windows iyo baabuur.
Dib file AVCHD lagu ciyaari karaa siyaabo kala duwan. Waxaan ka hadli doonaa seddex ka mid ah halkan:
Waxaad si toos ah xirmaan kartaa fiidiyo adiga oo TV la bixisey HDMI cable ama qayb-video cable iyo AVCHD loo maqli karo si toos ah video on your TV. Fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Fiiro gaar ah: Your TV-ga waa in ay ahaadaan TV High Qeexid ku qalabaysan ah HDMI terminal aqbasho
Dami ee fiidiyo iyo TV markii samaynta xidhiidhada ka
Isticmaal qeexitaanka sare HDMI cable bixisey in ay ku xidhmaan aad fiidiyo la TV.
Daar TV. Beddel aqbasho video on your TV in ay terminal la mid ah kaas oo aad u xiran cable ah.
Daar fiidiyo ah oo qarka u saaran inuu filim loo maqli karo haddii loo baahdo.
Si kale ee Radidiyaha AVCHD video yahay si ay u qoraan video eee DVD ah ka dibna video in la soo celiyo ciyaaray karaa iyadoo la isticmaalayo ciyaartoyda disc Blu-ray ama Playstation 3 ciyaaraha Console. Wondershare DVD abuure waa tusaale ka mid ah nooca ka mid ah DVD abuure. Iyadoo qalab aad u gubi kara wax kasta oo video, audio ama qaab image si DVD. Just raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1 Import / dar Videos
Riix Import ku darto video files. Added files waxaa lagu soo bandhigaa sida icon size dhexdhexaad ah ama thumbnail dhinaca bidixda ka Murayaad ah. Haddii kale ayaa sidoo kale aad u soo jiidi kartaa jeedi videos gal in ay ku darto videos. Si aad ku dari files badan soo celiso tallaabadaan.
Tallaabada 2 Videos Edit haddii loo baahdo
Haddii aad u baahan tahay in aad xaalkaa video click on qalin astaan ​​dhinaca bidix ee file video ama xaq-riix video iyo dooro ikhtiyaarka tafatir ah. U gudub tallaabada haddii aadan u baahnayn edit kasta.
Tallaabada 3 Customize DVD ee template iyo menu
Riix tab Menu ah. Waxaa waxaad ka heli doontaa doorasho ah inaad kala soo baxdo arrimo dheeraad ah haddii aadan ka heli template kasta oo ku haboon aad video for.
Ka dib markii in aad samayn karto qaar ka mid ah hawl dheeraad ah si uu u dhameystiro DVD aad sida ku daray music soo jeeda, qoraal text qaar ka mid ah aad menu, beddesho thumbnail cutubka iyo qaar badan.
Tallaabada 4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh mashruuca DVD ah
Tag tab kulanka xiisaha leh si ay u eegaan wax DVD aad wax yar ka hor waxaa gubanaya gal DVD disc ah. Hubi in dhammaan dhibaatooyinka soo ayaa loo qaaday meel sida aad rabtay.
Talaabada 5 videos Gubashada iyo sawiro si DVD
Ugu dambayntii waxaa la gaaray waqtigii ay gubaan aad disk. Waxaad gubi karaa cajaladaha ama badbaadin image ISO iyo abuuro DVD folder. Dooro TV ee caadiga ah: NTSC ama Pal in doorasho.
Haddii hardware your computer iyo nidaamka qalliinka taageertaa AVCHD video ka dibna waxaad u baahan tahay ciyaaryahan si Radidiyaha AVCHD video on your computer. Waxaa jira qaar ka mid ah ciyaartoyda laga heli karo suuqa ugu ciyaaro AVCHD video. Nooca noocan oo kale ah waa Wondershare Player. Si aad u ciyaaro AVCHD video on Wondershare Player raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1 download, rakibi iyo abuurtaan Wondershare Player
Download Wondershare Player website-ka rasmiga ah ee Wondershare ka dibna raaci edbinta onscreen si ay u rakibi on your computer iyo Burcad ciyaaryahanka.
Tallaabada 2 Calan goobaha ciyaaryahanka
Press F5 in la beddelo goobaha default ah. Settings waxaa loo kala saaraa hoos Head sida guud, Play, Ururada, Hot Key, Sawirka, Updates.
Tallaabada 3 dar video files inuu u ciyaaro
Si aad ku dari file a video aad si toos ah u soo jiidi kartaa jeedi file in gal playlist ama guji File Open in ay maraan si ay meesha aad deggan video, ka dibna riix file bartilmaameedka si aad u furto.
Tallaabada 4 Xakamee Play
Inta aad video la ciyaaray xakamayn karto loo maqli ah. Xaqa guji Murayaad iyo guddi gacanta ah ayaa soo bixi doona. Oo halkaasaannu ka xakamayn karto play ah, ku dar subtitles ama la furo file kale video. Ka dul dusheeda ka dhigi doonaa bar control oo ah in ay arbushin ilaa. Laga soo bilaabo waxaa aad dooran kartaa shaashad buuxda ah, qeybtii play screen iyo in ka badan.
Si loogu badalo files AVCHD in qaab kale oo aad u baahan doontaa Converter awood leh oo la isku hallayn karo. Wondershare Video Converter Ultimate Hubaal waa dhex joogaa iyaga. Wondershare Video Converter Ultimate Waxaa laga heli karaa labada Windows iyo Mac OS X. Waxaad Converter ka website-ka rasmiga ah ee Wondershare iibsan kartaa. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa version tijaabo ah Converter ah. Muuqaaladan muhiim ah Wondershare Video Converter Ultimate ka mid ah waa:
Aan aragno talaabo nidaamka talaabo si loogu badalo files AVCHD ah in qaab kale.
Tallaabada 1 Download, rakibi iyo abuurtaan Wondershare Video Converter Ultimate
Waxaa Download oo raaca on edbinta screen si loo soo dajiyo Wondershare Video Converter Ultimate on your computer. Marka la rakibo dhamaato furo Converter ah.
Tallaabada 2 Add / Import files AVCHD
Dooro tab loogu badalo ka dibna ku dar files / dejinta laba siyaabood oo kala duwan. Jidka First waa adigoo gujinaya badhanka files Add ee dhinaca sare bidix ama dhexe leeg- software ah. A new window Open muuqan doonaa. Laga soo bilaabo waxaa aad u isticmaali kartaa in meesha aad file deggan oo markaas dooran file oo guji Open.
Habka labaad waa ka sii dhib yar. Just furo buugga ay ku jiraan video file ka dibna si fudud u jiidi ka tusaha oo hoos u Murayaad software ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa files duwan oo isku mar.
Hadda waxaad u baahan doontaa inaad doorato qaabka wax soo saarka ah ee doorashada. Taas waxaad ku samayn kartaa adigoo gujinaya liiska hoos-hoos Qaabka Output dhinaca midigta leeg- ah. Wondershare Video Converter Ultimate Taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabka ay u badalaan aad file video AVCHD. Waxa kale oo aad loogu badalo kartaa video files nooc gaar ah qalabka sida iPad2, Samsung Galaxy S4, Windows Lumia 900 iwm
Top 5 FLV Free in converters MP4 for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Waa maxay qaabka AVCHD ama soo gudbin?